In luqadda ee suuq ugu hadda iyo isgaarsiinta, dallacsiintu waa dhiirrigelinta hal-abuurka ama dhiirrigalinta u janjeedha inay ka dhigto adeeg la yaqaan oo la mahadiyo, a’ hay'adda bulshada, wax soo saar ama fikrad…
L’ farshaxanka si loogu gudbiyo fikradahooda loona sameeyo shaqooyinkooda kuwo la qadariyo, wuxuu adeegsadaa hal-abuurnimo si uu u baadho xaqiiqda una helo dariiqyo cusub oo suurtagal ah.
Asal ahaan, farshaxanka iyo hal-abuurka ayaa sidoo kale sidoo kale ah qalab lagu dhiirrigeliyo fikradaha iyo dabeecadaha iyo xulashooyinka tooska ah.
…hadaanu nahay Promoearte waxaan haynaa adeegyo, soo saaro, alaabta iyo fikrado hal abuur leh horumarinta adiga / mashaariic our.
Waxaan kaloo aaminsanahay in, oo ku caan dhaawaca sababay in suuqa, by wararka dhaqaale macquul ahayn, waa in aan mar kale dib-u-xoogga saaraan in ay territory degaanka aannu ogaanno.
Waxaan nafteena dhig dareen this ujeedadiisu tahay in la taageero oo kor loo marayo abuuridda of network degaanka ah (Network Local): dadaallada, dhacdooyinka, bulshada ama ganacsi, taas oo ujeeddadeedu tahay inay naga caawiyaan inaan u weecino dareenkeenna aagga maxalliga ah. Iyada oo si gaar ah xooga ku saabsan arrimaha sida: ururada, cayaaraha hiwaayadda , tayada nolosha, arrinta deegaanka, arrimaha bulshada, taariikhda iyo dhaqanka maxalliga ah.